(tonga teto avy amin'ny Krismasy)
2 Tantaran’ny Noely
2.1 Fetin'ny mpanompo sampy
2.2 Fety kristiana
3 Daty akalazana ny Noely
3.1 Fiangonana katolika romana sy fiangonana protestanta
3.2 Fiangonana ôrtôdôksa
5 Loharano sy famarihana
Ny teny hoe noely dia avy amin'ny teny frantsay hoe noël izay avy amin'ny teny latina hoe natalis izay midika hoe "momba ny fahaterahana". Fa ny hoe krismasy kosa dia avy amin’ny teny anglisy hoe christmas izay avy amin’ny teny anglisy tranainy kokoa hoe crīstes mæsse izay midika hoe "fankalazana an'i Kristy" na "lamesan'i Kristy".
Tsy voalazan'ny Baiboly ho nankalaza Noely ny Kristiana tany am-piandohana.
Fetin'ny mpanompo sampyHanova
Talohan'ny naha kristiana ny Tandrefana dia nantsoina hoe Dies Natalis Solis Invicti ("Andro Nahaterahan'ny Masoandro Tsy Resy") ny datin’ny 25 Desambra. Isan’ireo andriamanitry ny Romana i Solis Invectis ("Masoandro Tsy Resy") tamin'izany. Tamin'ny nanjakan'ny emperora romana Aoreliano (frantsy: Aurélien) (taona 270–275) dia nataony ho andro firavoravoana lehibe hankalazana ny nahaterahan'io andriamanitra masoandro io ny 25 Desambra. Mifanandrify amin'ny andro nahaterahan'ny andriamanitra romana taloha Mithra (izay azony avy any Persia) io daty io, dia nankalazana miaraka ny fetin'ireo andriamanitra roa ireo. Fetin'ny fandresen'ny mazava ny aizina izany.
Rehefa lasa kristiana ny kolontsaina tany Andrefana dia nisy didim-panjakana nivoaka tany Tesalonika nandrara ireo fanompoam-pivavahan'ny mpanompo sampy ka ny Kristiana irery ihany no nankalaza sy lasa tompon'io fety io. Tsy milaza na ny taona na ny andro nahaterahan'i Jesoa Kristy ireo Filazantsara (na Vaovao Mahafaly) efatra. I Origenesy (frantsay: Origène) dia isan'ireo tsy nanaiky ny fankalazana ny Noely. Tsy nankalazaina ho fety kristiana izany raha tsy afaka taonjato telo taty aorian’ny nahaterahan’i Jesoa Kristy. I Hipolito avy any Roma (frantsay: Hyppolyte de Rome) no nilaza fa teraka 25 Desambra i Jesoa raha nanao ny hevitenin’ny Bokin'i Daniela izy tamin'ny taona 204.
Tamin'ny taonjato faha-17 ireo firenena nandray ny fivavahana vokatry ny reformasiona (na reforma, fanavaozam-piangonana) dia tsy nankasitraka ny fankalazana ny Noely izay heveriny ho mitovy endrika loatra amin'ny fetin'ny mpanompo sampy na ny fety katolika. Noleferiny ihany izany taty aoriana ka lasa fanao. Amin'izao fotoana izao dia mankalaza Noely ny ankamaroan'ny Kristiana. Torak'izany koa na ny tsy Kristiana izay manao azy ho fetim-pianakaviana fotsiny ka lasa betsaka ireo fombafomba tsy misy ifandraisany amin'ny fivavahana kristiana izay ankalazany ny Noely.
Fiangonana katolika romana sy fiangonana protestantaHanova
Tamin'ny andron'ny Papa Liberio (frantsay: Libère) (taona 352 – 356) dia noraiketina ho amin'ny 24 Desambra hariva sy 25 Desambra tontolo andro ny andro ankalazana ny nahaterahan'i Kristy. Ny Rain'ny Fiangonana dia tsy nanohitra ny fisafidianana an'io daty io satria manamafy ny fahatongavan'ny Mesia izay nambara fa kintana miposaka (Lio. 1.78) sady masoandron'ny fahamarinana araka ny voalazan'ny mpaminany Malakia (Mal. 3.20). I Kristy no ilay "tena masoandro" sy "masoandro vaovao" izay mamirapiratra eto amin'izao tontolo izao.
Ny Fiangonana ôrtôdôksa dia mankalaza Noely amin'ny 6 sy 7 Janoary izay mifanadrify amin'ny fetin'ny Epifania.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Noely&oldid=978757"
Dernière modification le 28 Desambra 2019, à 05:32